China Solar Air Conditioner, Solar Air Conditioner, Solar Split Air Conditioner Manufacturer
Tsanangudzo:Solar Air Conditioner,Solar Powered Air Conditioner,Solar Split Air Conditioner,Solar Mini Air Conditioner,,
Solar Air Conditioner,Solar Powered Air Conditioner,Solar Split Air Conditioner,Solar Mini Air Conditioner,,
Home > Products > Solar home / DC system > Solar Air Conditioner
Zvigadzirwa zve Solar Air Conditioner , isu tiri vashandi vanobva kuChina, Solar Air Conditioner , Solar Powered Air Conditioner vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve Solar Split Air Conditioner R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
China Solar Air Conditioner Vatengi
Muchirevo chekudziya kwepasi pose, simba rezuva, semumiririri wezvemagetsi matsva, inofarirwa nenyika dzose pasi rose. Pasi pemaitiro ekuderedza carbon energy saving, simba rezuva rinonyanya kushandiswa pakugadzira uye kupisa teknolojia yakave yakashandiswa kumakambani akasiyana-siyana uye iri kuramba ichivandudza masimba emagetsi. Izuva rinoshandisa simba remhepo rinotora kupisa uye firiji inofungidzirwa, uye chivako chivako chehofisi, hostel, chikoro, chipatara, dziva rekushambira, mvura, mvura, etc.
Nenguva yekuchinja kwemazuva emhepo yakagadzirwa nemhepo yakanaka, uye kukonzera simba kwegadziriro inowedzera nekuwedzera kwemazuva emhepo, iyo inowirirana nechishuvo chakakurumbira chevanhu kune air conditioner muzhizha.
Iko tsika yekugadzirisa firiji USES freon seyakasviba, iyo inokuvadza zvikuru kumhepo, asi firiji inoshandisa mvura isina chekuita uye isina chaanopisa kana lithiamu bromide sepakati, iyo inobatsira zvikuru kumhepo.
Izuva rezvemhepo rinokonzera mhepo inogona kuunganidza kupisa kwezhizha, kutonhora kwechando uye dzimwe nguva dzekupa mvura inopisa, iyo inonyanya kushandisa kushandiswa uye hupfumi hwemazuva emagetsi ezuva.
Solar air conditioner system inogona kuunza mukana wehutano hwekukonzera muzhizha, kupisa mukati mechando uye kupa mvura inopisa gore rose, uye huchawana hukuru hunoshamisa hwezvematongerwo enyika, hwemagariro evanhu uye hwezvakatipoteredza, uye hune tariro yakawanda yehuwandu hwevanhu uye yekushandiswa.